Best mari yakadii yekusimbisa mu 2022. Kuwedzera kukura mari yedhijidhi nekusimudzira kwakasimba (zvishoma nezvishoma kusagadzikana).
Top 10 yakanakisisa mari yedhizimusi yekutsvaga migodhi nekutenga, ichikura zvishoma nezvishoma mumutengo wemari yemari yemadhora mumwedzi mitatu yapfuura.
Kukura nokukurumidza mari yemari
Ultra (ULTRA) 56.42 %
Iyo yakanakisa cryptocur lwemari subjective pfungwa kune wese investor.
Mari yemadhora munyika inoshandiswa senzira yekudyara uye sechinhu chekubhadhara, analog yemari.
Yakanakisa crypto semari, sechipo chekubhadhara chakatemwa nekumhanya kwekutapurirana, iyo yakaderera komisheni kana kushayikwa kwayo pachiitiko, huwandu hwevaridzi ve crypto wallets, pamwe nekuzorora kwekuchinjana kune chaiyo mari.
Iyo yakanakisa digital mari senzira yekudyara yakatemwa nekubudirira kwayo, iko kusingaperi kukura kweiyo digital mari rate uye zvakare kugadzikana kwechiyero.
Iyo cryptoratesxe.com sevhisi Best dollar mari inoratidza yakanakisa crypto maererano nekudyara.
Isu tinoteedzera pa online exchange rate yevose crypto, shanduko yekuchinja-shanduko, kusimba, kukura kwesimba uye mamwe ma parameta kurongedza yakanakisa mari yemadhora munyika.
Tafura yeiyo yakanakisa mari yemadhora inoratidza iyo yepamusoro yechitatu yepamusoro crypto mari. Kushandisa tafura yeiyo yakanakisa mari yemadhora ndeye mahara, ruzivo rwakagadziriswa online.
Iyo chati yezve yakanakisa mari yemadhora inokutendera iwe kuti uone nhoroondo pfupi yereji yakasarudzwa mune yedu yepamusoro yepamusoro crypto. Pa graph yeiyo yakanakisa crypto iwe unogona kuongorora kugadzikana kwekukura kwemari uye kusarudza zvekudyara mune yakanakisa digital mari.
Kukura mari yemadhora ari cryptos, chiyero chayo chave chiri kukura nekufamba kwenguva.
Kukura kwe Digital mari ipfungwa yakaenzana. Mwero wemusika weiyo chero digital mari inotengeswa pane iyo crypto-exchange inogara ichichinja, ichiwedzera uye ichiderera. Nekudaro, izvo zvinokwanisika kutaura nezve kuwedzera kana kuderera kweiyo chiyero chekuchinjana kune imwe nguva yenguva.
Kune akasiyana ehuwandu hwekufungidzira kwekukura kwe digital mari. Mune yedu sevhisi Best dollar mari, isu tinoshandisa imwe yeanonyanya kuzivikanwa cryptocur lwemari fungidziro kwemwedzi mitatu yadarika.
Iko ndiko kuwedzera kwakanyanya pamwero we crypto pamusoro pemwedzi mitatu isu yatinotarisa sekuwedzera kwakanyanya muyero ye digital mari.
Mari yemadhora ine zvishoma kuderera.
Mari yemadhora ine zvishoma kuderera - iwo mari yemadhora ane huwandu hwekutsinhana ine kushoma kushanduka. Zvikasadaro, mari yemadhora ine zvishoma kuderera kunogona kunzi mari yemadhora ine yakanyatsogadzika yekuchinjana rate.
Yakaderera kusimba inokodzera kudhara refu. Kupinza kushomeka mune iyo digital mari exchange rate yeiyo yose inokurudzira kufambisa uye kusatarisirwa.
Kudyara mune mari yemadhora ine mashoma kudzikira kunoruramisirwa kwenguva yakareba yekudyara mari.
Best dollar mari 2022
Mari yakanakisa ye 2022 isahara yemahara online webhusaiti yedu inoratidza TOP mari yemadhora nemhando yepamusoro yekushandurwa kwemari uye kushoma kuderera kwe 2022.
Iyo yakanakisa crypto ye 2022 inofungidzirwa pamusoro pekuongororwa kwemwedzi mitatu yadarika. Isu tinofananidza kukura kweiyo digital mari exchange rate uye kusimba kwayo kana kusimba uye kuvaka huwandu uye TOP yeakanakisa mari yemadhora mu 2022.
Chiyero cheyakanakisa mari yemadhora ye 2022 inosanganiswa zuva nezuva. Shandisa basa redu kusarudza yakanakisa digital mari yekudyara kwenguva refu.